guryaha Apartment 1 1/2 qorshe, Aagga ku saabsan 70 sq, 2 qol iyo jiko iyo qol kaydinta ka go'ay. Hantida waxa uu ku yaalaa ku saabsan 15 km galbeed ee Liden oo ku saabsan 55 km galbeed ka xigta Sundsvall. goob wuxuu ku yaalaa östsluttning a iska indha qaybo ka mid ah Holmsjön. dhismaha ayaa oandvänd sanado badan oo ay leeyihiin korontada lahayn, biyaha iyo booso. size goob 7 511 sq.
Akution iyo bandhig
Guryo iyo dhul iibisay kabta 3 May Bultgatan ah 14, Sundsvall.
Display Wednesday 25 April at 12.00, ka dib markii wargelinta p 010-5760726 maalin ka hor safar ku.
hantida ay leedahay koronto jirin, biyaha iyo fayadhowrka. Kululaynta waa kaliya by woodstove. jir ayaa la sameeyey qori, u jeedo dibadda ee darfahoodii qori, Asal ahaan nooca meel gurguurta ee la taaban karo / dhagax, saqafka la damacsan by xaashi. Dhismaha ayaa baahi weyn ee dayactirka labadaba- dibadda, shooladda waa xaalad saboolka ah, daaqadaha badan waa jajaban yihiin.
Areal 7 511 sq, oo ka kooban meelaha cawska, oo kaynta ku yaal oo qayb yar. goob wuxuu ku yaalaa a meel sare östsluttning iyo aragtida qaybo ka mid ah Holmsjön.
hantida Advertisement – kronofogden.se/3133.html.
Adeegyada Macaamiisha Enforcement
Waa maxay xaraashka khasabka ah?
Items iibisay kabta dahabka ah dadweynaha ayaa xaraash sababtoo ah milkiilaha leeyahay deyn aan la bixin. waxyaabaha iibin by miis fadhiya.